Sida loo bar Ardayda Itoobiya Your Fasalka | USAHello
Itoobiya: Fahamka ardayda ka soo jeeda Itoobiya iyo dhaqankooda
barayaasha badan oo wax ku barayay ardayda kala duwan sheegaan in aanay macluumaadka asalka dhaqankooda ku filan heli on ardaydooda. Haddii aad wax ku barayay ardayda qaxootiga, waxaa muhiim ah in laga war hayo oo cusub’ soo jeeda. Xogta hoose ayaa waxaa loogu tala galay in ay sharaxaad guud laga bixiyo warbixinta kooban ee muhiimka ah, si aad dhisatid xeelado waxbaridda dhaqan ahaan ku jira habayn ardayda aad’ Hababka waxbarasho gaar ah.
Amharic iyo Ingiriisi
Itoobiya waxay leedahay mid ka mid ah dadka ugu badan ee dunida waxna qorin (ka badan 60%). waxbarashada aasaasiga ah (fasalada 1 in 8) waa lacag la'aan iyo in khasab aragti. waxbarashada dugsiga waa fasalada 9-11. Qaar badan oo ardayda dakhligoodu hooseeyo halgan si ay ula qabsadaan dhaqanka ee dugsiyada dadweynaha loogu talagalay qoysaska dabaqadda dhexe. Sidaas darteed, arday badan ka tagaan dugsiga.
Boys leeyihiin fursado waxbarasho oo ka badan gabdhaha. Waxaa lagu hafray baahsan in gabdhaha yar karti badan wiilasha, iyo in waxbarashada gabdhaha waa maalgashi saboolka ah. Takoorka iyo xadgudub jirka qaar ka mid ah gabdhaha caqabadaha wajihi doona marka ay dugsiga dhigtaan. Carruur badan oo Ethiopian maqan gaadhista shaqada iyo hoggaanka fursado koox ee ururka.
muddooyinka Soonka (hoos eeg, hoos dhaqanka) waxaa laga yaabaa in waayo-aragnimo ah oo jidh ahaan iyo maskax ahaan adag ee ardayda.
Qoyska / Dugsiga Engagement
Qoysas badan oo Ethiopian haajiraan si ay uga baxsadaan saboolnimada, laakiin heli naftooda underemployed ama shaqo la'aan ka dib markii Mareykanka. Qaar badan oo aakhirka ka shaqeeya adeega mushaar hooseeyo (la dhigto, saldhigyada gaaska, dukaamada, maqaayado, iwm). Qaxooti badan ma yaqaanaan sida in la wado ama haysan baabuur, sidaa darteed gaadiidka dhacdooyinka dugsiga uu noqon doono tartan loogu talagalay waalidiinta jecel inay lug.
Guud ahaan, dadka midba midka kale salaama dhunkaday badan labada daan. dadka waayeelka ah waxaa lagu daaweeyaa oo ka fiirsaday si ixtiraam leh sare.
Waxaa wanaagsan in la ogaado in Ethiopia leedahay taariikh Qaybta qowmiyadaha. Intaas waxaa sii dheer, Itoobiya waxay leedahay afar fasalo bulshada waaweyn iyo laangaabka leh qabiilooyinka sar sare ugu sareysa, ku xiga abtirsiin low-darajeeyo. xubin rag & dumar waxa lagu qoray by dhalashada.
Soccer waa hawl in badan oo Itoobiyaan ah oo ka qaybgalo in ay xoojiso dareenka lahaansho. Ku biiritaanka kooxaha taageerada bulshada iyo dhaqaalaha loo yaqaan story Waxa kale oo kobcin kara dareenka qaxootiga ka tirsan.
Gender, Dhaqanka, iyo Qoyska
Dad badan oo Itoobiyaan ah ayaa weli aaminsan nahay in haweenka ay yihiin hoos timaada ragga. Haweenka inta badan waa aqoon yar oo ay leeyihiin madaxbannaani dhaqaale ka yar. lab ugu da'da weyn waa madaxa gaare qoyska iyo go'aanka. Waxaa jira inta badan saddex ilaa afar fac ka mid ah qoyska. Ragga galaan shaqada jirka guriga ka baxsan iyo haweenka waa ay mas'uul ka ah shaqada qoyska. Carruurta ayaa ka masuul ah daryeelka waalidkood. Gabdhaha masuuliyad ka badan wiilasha.
Sababta oo ah farqiga u doorarka jinsiga, qabsiga dhaqanka American inta badan waa ku adag tahay qoysaska ajinebiga Itoobiya. Mararka qaarkood is qaba kulmaan xiisad sababta oo ah bulshada, siyaasadeed, iyo xoriyada dhaqaale siiyo haweenka ee Maraykanka. Mararka qaarkood, xiisaddan ayaa keentay in rabshadaha qoyska ama furiinka qoysas badan qaxootiga Itoobiya ee Maraykanka.
Itoobiya waa in ay gacmahooda had iyo jeer ku maydho ka hor waqtiga cuntada tan iyo cuntada oo dhan waxaa cuni gacmo ka ah saxan / saxaarad la wadaago. Dhaqan, guests bilaabo cunidda. marka wax la cunayo, waa ku habboon si ay u soo jiid injera kaliya ka bannaan si toos ah idinka soo hor jeedda. Waxaa xushmad leh in ay ka qaybqaataan wada hadalka marka wax la cunayo tan iyo bixinta si ay cuntada complete fiiro waxaa arko xanuunsan-mannered.
Inta lagu jiro xilliyada soonka Christian (kala duwan yahay shaqsi ama kaniisadda), ma soo saarka xoolaha la cuni karin oo mar cunto ama cabitaan waa la wada baabbi'in karo ka saqda dhexe ilaa 3:00PM. Tani waa habka caadiga ah ee soonka inta lagu jiro toddobaadka, iyo Sabtida iyo Axada jirin wax soo saarkooda u baabba'o, inkastoo aan waqti xadaynta on soonka.
IRC QAXOOTIGA MACALLINKA WARAAQAHA
La wadaag Fikradaha Your
Haddii aad qabtid wax ah faalooyin ama macluumaad dheeraad ah ama fikrado in ay wadaagaan on barayay ardayda Itoobiya, fadlan email: info@usahello.org.
Qaado Course for our Barayaashu
Haddii aad jeclaan lahayd tababar dheeraad ah oo ku saabsan sida loo baro ardayda qaxootiga iyo soo galootiga, fadlan ogow qorayso in our Dabcan, Waxbaridda Refugee iyo Ardayda Immigrant: Course An Online for Macallimiinta.
Print Information sida PDF ah
Waxaad kala soo bixi kartaa oo aad daabacan this profile bartaha Itoobiya sida PDF ah oo xajiya khayraad ee fasalka.